33 Mersin | RayHaber
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụdị njem na-abata n'uche mgbe a na-ebuga njem ụgbọ mmiri, ụzọ kachasị ebu ụzọ bụ ụgbọ njem na-ebuga n'okporo ụzọ. N’ọtụtụ obodo nke ala anyị ruo ọtụtụ afọ ma ụgbọ ala ma nke mba [More ...]
Otu n'ime ihe dị mkpa nke mkpa taa bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ngalaba ọrụ lọjistik. Ihe mbu n’abia n’uche banyere oru o bu ezi uche bu, ibu, ugbo njem, ebe nchekwa, nhichapu ahia nke ahia di iche-iche na ebe nnabata ekwenye ekwenye. [More ...]
Companieslọ Ọrụ Na-ebupụ Uzubekistan
Ebe ọ bụ na njem ụgbọ ala mba ụwa bụ otu n'ime ụzọ dị mkpa taa maka usoro mbupụ na mbubata, ọtụtụ ụlọ ọrụ ngwa agha amalitela ịrụ ọrụ na obodo anyị. Companieslọ ọrụ ndị a gụnyere mba Europe na Eshia. [More ...]
Mersin, na-enwe nsogbu inweta ego mgbazinye n’aka ụlọ akụ ọha metụtara ego itinye usoro okporo ụzọ, gawara mba ofesi. Onye isi obodo Mersin Metropolitan Mayor Vahap Seçer kwuru, Wem Anyị na-achọ otuto site na mba ofesi. Anyị chọrọ inye ego na owuwu nke azụmahịa ebe ” [More ...]
Mayor Seçer na-enye Datebọchị maka Mersin Metro; Mersin Obodo ukwu Mayor Vahap Seçer bụ İsmail Küçükkaya bịara na mmemme “Mkpu elekere” nke si na FOX TV. Onye isi oche Seçer, Metro [More ...]
Onye isi ala Seçer nwere ekele nye Onye ọkwọ ụgbọ ala; Aziz Oğuz, onye rụrụ ọrụ dịka onye na-anya bọs na Mersin Metropolitan Obodo, bịanyere aka na akụkọ mmeri nso nso a. 63 dị afọ XUKX, onye nwere nkụchi obi na bọs ọ jiri [More ...]
TCDD na-achọ Ngwọta maka Ntugharị Mmemme maka insgbọ oloko
TCDD na-achọ ọgwụgwọ maka ụdị egweri a na-etinye nchekwa ndụ na ihe onwunwe n'ihe egwu ụgbọ oloko. Na 2019, ụgbọ oloko 327 bụ ala. Wagon windo gbawara n'ihi ihe egwu ahụ. Ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ site na onye ọkwọ ụgbọ ala rue onye ọkwọ ụgbọ ala; ọtụtụ puku [More ...]
Onye isi oche Seçer na-eme nyocha na Mersin Port
Onye isi oche Seçer na-eme nyocha na Mersin Port; Mersin Metropolitan Municipality Mayor Vahap Seçer gara Mersin Port ma nata ozi site n'aka ndị isi Mersin International Port Management (MIP). Onye isi oche Seçer, Mersin International Port [More ...]
Ihe omuma atu nke Heroism site na onye na abukpo Bus na Mersin
Ihe omuma atu nke Heroism sitere na onye ngbochu ugbo ala na Mersin; Aziz Oğuz, onye rụrụ ọrụ dịka onye na-anya bọs na Mersin Metropolitan Obodo, bịanyere aka n'akwụkwọ akụkọ dike. Faruk Özcan, 63 nwere nkụchi obi [More ...]
Tram biara na Mersin na Metro; Onye isi obodo Mersin Metropolitan Munara Vahap Seçer gara nzukọ “Nwanna Nwanyị, Ndị Ọchịchị Obodo Na-eme Ọgbakọ” nke ndị otu ya mere na İzmir. N'ime ogige ahụ nke onye isi obodo 252 Seçer, Istanbul, [More ...]
'A ga-eme ebe a na-eme njem ugwu na Mersin; Obodo Mersin na - agbakwunye ihe ọhụrụ na mbọ Mersin iji meghe ụzọ maka iji ebe a na - eji ịnyịnya ígwè eme ihe na ebe dị mma, echekwabara yana ntụsara ahụ. Nnukwu Obodo, Mahadum Mersin [More ...]
Rozọ na-agbanwe na Mersin Metro; Onye isi obodo Mersin Metropolitan Mayor Vahap Seçer, nke Ngalaba Ezinụụlọ na ụmụntakịrị haziri, ndị mukhtars kpọkwara. [More ...]
Mersin, ilzọ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu gbagoro; Onye isi obodo Toroslar Atsız Afşın Yılmaz, onye bụkwa onye isi oche nke njikọta ihe ndị njem na mpaghara Mersin na gburugburu ya, Onye isi oche nke Afọ 2020 [More ...]